ALAROBIA 1 AVRILY 2020
ANDRANOMANELATRA : Foana tanteraka ny fasana, nametraka hafatra hafahafa ireo jiolahy
Mahazo vahana ny halatra taolam-paty eto amintsika ary tsy mbola fantatra mazava izay tena ao ambadik’ity raharaha ity. 27 août 2019
Raha ny zava-misy eny amin’ny fiarahamonina dia betsaka ny manana ahiahy fa misy afera goavana ny antony ilàna taolam-paty, no sady misy tambajotra goavana mandray sy mividy lafo azy ireny. Raha ny loharanom-baovao voaray matetika moa dia saika misy ihany ireo olona tratra kanefa dia toa misafotofoto be ny tena zava-mitranga marina ao ambadika. Izany no tena isany mampitaraina ny olona, indrindra ny eny ambanivohitra, misy fasana mitokatokana. Efa betsaka ireo fianakaviana no very taolam-balo, vaky fasana.
Tsikaritra ihany koa fa rehefa fotoanan’ny famadihana no tena mampirongatra azy io. Raha ny zava-nisy tao Ambohimiarivo Kaominina Andranomanelatra, Distrika Antsirabe II iny ihany koa izao dia azo lazaina fa tsy nisy taolam-balo intsony tao am-pasana no sady mbola namelan’ny jiolahy hafatra hafahafa izy ireo. Ankona tanteraka ny fianakaviana raha sendra nahita razana lena iray sy karan-doha sisa tavela tao am-pasana.
Tamin’ny andron’ny famadihana niarahan’ny fianakaviana, ny alatsinainy faha-19 aogositra 2019 lasa iny no hita fa razana lena iray vao nalevina fotoana vitsy sy karan-doha no sisa tao. Niparitaka tanteraka ny lamban-drazana ary ny tena nahavariana azy ireo dia mbola nahitana taratasy navelan’ny jiolahy tao izay milaza fa « asakasak’izay tsy hanao fa fito alina ariary ny kilao ». Vaky saina tanteraka ny fianakaviana manoloana ny zava-nitranga.
Nihoa-pefy ny mpitari-posy, nirefotra ny lakrimôzena polisy iray naratra voatora-bato FANDAVANA FIHIBOHANA (177) 27 mars 2020 Lehilahy 23 taona hita faty tao an-tranony ny sabotsy antoandro lasa teo ARANTA (122) 31 mars 2020 Nankatoavin’ny Fanjakana malagasy sy ny Oms FIKAROHANA HIADIANA AMIN’NY CORONAVIRUS NATAON’NY IMRA (114) 27 mars 2020 Tranga 6 nanokafana fanadihadihana, olona iray naiditra am-ponja FANAPARITAHANA VAOVAO TSY MARINA (110) 27 mars 2020 Fiara iray nifaoka mpandeha an-tongotra, miisa 02 ireo maty tsy tra-drano TSARASAOTRA (87) 27 mars 2020 Lavon’ny balan’ny Polisy ny jiolahy iray, karohina ny namany FIKASANA FANAFIHANA “VILLA” (78) 31 mars 2020